Waa maxay lafo-jileeca | Sameynta iyo daraasadaha
Mashruuca Shaqada Ugu Dambeysa
Mashaariicda cilmi baarista
Ka Bixitaanka Shaqada
Waa maxay lafo-jileeca
Maria Jose Roldan | 03/12/2021 11:24 | Ka Bixitaanka Shaqada
Inkasta oo ereyga lafo-beelku uu u eg yahay mid ay yaqaaniin dad badan, runtu waxa ay tahay in aanu qof kasta aqoon waxa uu yahay iyo waxa loo isticmaalo. Lafo-jileecu waa daawaynta nooca dabiiciga ah oo raadisa in lagu yareeyo xanuunka iyada oo loo marayo sababta ama sababta keenta xanuunka. Lafo-jileecu wuu ka guuraa hababka daawaynta dhaqameed ee nolosha, isagoo raadinaya in natiijadiisu noqoto mid aad loogu qanco.
Maqaalka soo socda waxaanu si qoto dheer kuugula hadli doonaa oo ku saabsan lafo-xanuun iyo ee ujeedooyinka daaweynta dabiiciga ah.
1 Waa maxay lafo-jileecu?
2 Faa'iidooyinka lafo-beelka
3 Waa maxay farsamooyinka uu isticmaalo lafo-xanuunku
4 Shaqada lafaha
5 Farqiga u dhexeeya osteopathy iyo xanuunka loo yaqaan 'chiropractic'
Waa maxay lafo-jileecu?
Lafo-jileecu waa daawayn ka duwan daawaynta nolosha oo ka shaqaynaysa aragtida ah in qaabka lafaha oo dhami uu si toos ah ugu xidhan yahay hawlaha jidhka. Habkan xirfadlaha osteopathy ama osteopath wuxuu isticmaalaa gacmahooda, si loo yareeyo xanuunka uu bukaanku qabo iyo si loo gaaro in xaaladda caafimaad ee qofka la sheegay ay si aad ah u soo hagaagayso. Lafo-jileecu waxay si toos ah ugu shaqeeyaan qaab-dhismeedka lafaha bukaanka, labadaba habka qaab-dhismeedka iyo xubnaha gudaha laftooda.
Lafo-jileeca ayaa si gaar ah loogu tilmaamay xanuunnada ama xaaladaha soo socda:
Xanuunada saameeya dhammaan nidaamka lugaha sida lafaha, seedaha ama kala-goysyada.
Xaaladaha habdhiska neefsiga sida hargabka, hargabka ama boronkiitada.
Xanuunada dheefshiidka sida xaalad calool istaag, gaas ama laabjeex.
Xanuunada caafimaadka maskaxda sida stress, niyad-jab, ama walaac.
Xaaladaha carruurta sida dhibaatooyinka hurdada ama firfircoonida.
Waa maxay farsamooyinka uu isticmaalo lafo-xanuunku
Iyadoo ku xiran qaybta jidhka ee uu ku shaqeynayo, lafo-xanuunku wuxuu isticmaali doonaa farsamooyin kala duwan:
Farsamada qaabdhismeedku waa tan la isticmaalo marka la saxayo xanuunnada kala duwan kuwaas oo guud ahaan saameeya nidaamka lugaha sida lafaha ama murqaha.
Farsamo kale oo uu isticmaalo lafo-xanuunku waa visceral. Iyadoo loo marayo xirfadlaha osteopathy wuxuu raadiyaa inuu gaaro dhaqdhaqaaqa ugu fiican iyo shaqaynta viscera ee jidhka.
Farsamada saddexaad ee uu isticmaalo lafo-xanuunku waa sacral-cranial. Waad ku mahadsan tahay, dhaqdhaqaaqa ugu fiican ee dhammaan dareeraha cerebrospinal ayaa la gaaraa, xalinta dhibaatooyinka sida madax-xanuun, dawakh ama cillado dheefshiidka.
Dad badan ayaa la yaabban inta wakhti ee xirfadlaha lafaha lafaha ay tahay inay ku qaataan si loo yareeyo xanuunka qaarkood. Caadi ahaan, lafo-xanuunku wuxuu ku qaataa qiyaastii 90 daqiiqo ama wax ka badan bukaankiisa, gaar ahaan fadhiga ugu horreeya. Waxa ugu horreeya ee xirfadlaha lafaha wanaagsan uu sameeyo waa inuu sameeyo ogaanshaha ugu wanaagsan ee suurtogalka ah iyo halkaas, ka codso farsamada uu u arko inay habboon tahay. La-tashiga soo socda waa caadi in xirfad-yaqaanku uu qaato waqti aad uga yar si loo daweeyo bukaanka. naftiisa u huray wax kasta oo ka sarreeya sababta ama sababta xaaladdan ama khalkhalkaas.
Farqiga u dhexeeya osteopathy iyo xanuunka loo yaqaan 'chiropractic'
Dad badan ayaa inta badan ku wareersan daaweynta lafo-beelka iyo ku-dhaqanka xanuunka loo yaqaan 'chiropractic therapy'. Xaaladda lafo-beelka, waa in la sheegaa in ay tahay mid dabiici ah oo dabiici ah oo ka duwan oo ka kooban beer aad u weyn oo ka badan xanuunka loo yaqaan 'chiropractic'. Sidan oo kale, osteopathy waxaa ku jira farsamooyin kala duwan oo leh ujeedo lagu hagaajinayo xanuunka iyo xanuunka murqaha iyo sidoo kale in la gaaro isku dheelitirnaanta jirka iyo maskaxda.
Marka laga hadlayo xanuunka loo yaqaan 'chiropractic', farsamada noocan ahi waxay aad diirada u saaran tahay xanuunka daran ee ka dhaca dhabarka ama lafaha laftooda. Lafopractor-ka wuxuu isticmaalaa gacmihiisa si uu isugu dayo inuu yareeyo xanuunkan oo kale isaga oo aan sii socon, sida haddii ay ku dhacdo kiiska lafaha.
Marka la soo koobo, lafo-beelka oo ah daaweyn kale oo ka mid ah daawada dhaqameed waxay leedahay difaacyadeeda iyo kuwa wax u dhimaya. Waxaa jira dad doorbida dawada inta ay nool yihiin marka ay daaweynayaan xaalado kala duwan. Si kastaba ha ahaatee, dad aad u tiro badan ayaa go'aansada inay aadaan dhaqanka noocan ah si ay u wanaajiyaan xaaladooda iyo cilladahooda oo ay u helaan caafimaad wanaagsan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Sameynta iyo daraasadaha » Daraasado » Ka Bixitaanka Shaqada » Waa maxay lafo-jileeca
Waa maxay lafo-xanuunku?
Maxaad u baahan tahay inaad barato si aad u noqoto kalkaaliye caafimaad?
Ku hel macluumaadka ugu fiican ee ku saabsan tababarka iyo daraasadaha emailkaaga.